Momba anay - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd. hita ao amin'ny Ziya Recycled Economic Zone Zone, tany am-boalohany tamin'ny volana oktobra 2008, ary nanomboka nanokatra ny tsena an-trano avy amin'ireo mpivarotra sy orinasa varotra.
Nanomboka ny taona 2010 dia namorona tsena ivelany izahay, tamin'izany fotoana izany dia nanangana ekipa varotra varotra.
Tamin'ny 2013, izahay no nandray anjara voalohany tamin'ny Kanto Voasary, ary nanohy nanitatra ny ekipanay.
Tamin'ny taona 2015, nanomboka nandray anjara tamin'ny fampirantiana vahiny matihanina.
Tamin'ny taona 2017, namaly ny politikam-pirenena fiarovana ny tontolo iainana,
Nifindra tany amin'ny National Industrial Recycled Economic Park izahay --- Ziya Industrial Park. Nandritra izany fotoana izany dia nanavao sy nohavaozina ny orinasa taloha izahay mba hamokatra miaraka.
Ho an'ny famokarana, nohavaozina ny fampitaovana, novaina avy amin'ny fomba nentim-paharazana ho an'ny fitaovana vita amin'ny fanadiovana tokana ho an'ny fitaovana fanodinana natokana ho azy, nanatsara ny fahombiazan'ny famokarana izany.
Ho an'ny fanaraha-maso kalitao dia mitoetra amin'ny rafi-panaraha-maso akaiky ny rafitra, ny fizahana azy amin'ny fananana ara-batana sy ny zavatra simika simika raha vao miditra amin'ny orinasa ny akora. amin'ny fizotry ny famokarana, ny inspektera dia hanao fisafoana tsy miangatra sy ny fisafoana toerana; ny vokatra efa vita dia ho sedraina, sary ary apetraka miaraka amin'ny tatitra fanaraha-maso nataon'ny QC alohan'ny handefasana azy. Ho antoka ny kalitaon'ny vokatra, omeo antoka ny zon'ny mpanjifa sy ny tombontsoany.
Tamin'ny taona 2019, hanara-maso bebe kokoa ny tsena, ny orinasa manatanjaka ny fitantanana, tamin'ny voalohany dia mamorona rafi-pitantanana sy rafitra fiasa, mameno ny fisoratana anarana ara-barotra an-trano sy any ivelany, nahatratra ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001 ary fanamarinana CE.
Ho an'ny fitantanana mpiasa dia raisinay "fianakaviana" ho fototra ihany izy ireo, tsy ny mpanjifa tsirairay ihany no raisina ho toy ny mpiray tampo aminy fa koa mametraka ny "fianakaviana" amin'ny mpiasa-mizara fiahiana amin'ny fialantsasatra, fiofanana isan-karazany, mandamina mpiasa miasa, fanatanjahan-tena, ka izay ny mpiasa dia afaka milamina am-pifaliana izay miasa, hita taratra ny fahatsapan'ny mpiasa tsirairay fa tena mandray ny orinasa ho fianakaviana.
Ho an'ny mpanjifantsika, mifikitra hatrany amin'ny foto-kevitra isika hoe "kalitao fototra, lazao ny maha-zava-dehibe ny serivisy, ny serivisy ho an'ny tsara indrindra, ny mpanjifa no voalohany". Nandritra ny fivoarana 12 taona, nifandray tamin'ny filozofianan'ny raharaham-barotra isika hoe "manavao ny vokatra vaovao handrosoana, hanamafy ny vokatra efa tranainy ho an'ny fanamafisana". Fanamafisana ny tsena efa misy, mandritra izany fotoana izany dia manohy mihamatanjaka sy matanjaka hatrany isika.
Miaraka amin'ny fifaninanana mihamiratra hatrany amin'ny tsena an-trano sy any ivelany dia miatrika tsindry sy fanamby avy amin'ny lafiny rehetra isika, saingy mifantoka hatrany amin'ny kolontsaina «trano» isika ary manatsara ny teknika fanamboarana sy ny kalitao maharitra hatrany.fa mino izahay fa handroso hifanerasera amin'ny mpanjifanay taloha amin'ny ho avy, mihaona namana vaovao ary mahazo ny fanohananao.
Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd. Ny mpikambana rehetra, miarahaba anao miverina "an-trano".